Ny Moto G5 dia azo vidiana any Espana | Vaovao momba ny gadget
Ny Moto G5 dia natolotra ny Alahady 26 Febroary lasa teo, tao anatin'ny rafitry ny Kongresin'ny World Mobile any Barcelona, ​​ny orinasa sinoa Lenovo dia efa nitantana ny fanamboarana ireo fitaovana ireo hatrizay ary amin'ity kinova vaovao ity dia nahavita manatsara ny modely teo aloha miaraka amin'ny antsipiriany kely toy ny fahatongavan'ilay metaly amin'ny chassis na ao ambadik'io mitazona ny vidiny amin'ny sehatra mahaliana tokoa na eo aza ny fanovana natao.
Amin'izao fotoana izao, ny tranonkala ofisialin'ny orinasa dia mbola tsy manavao ny daty fandefasana azy, faamin'ny Amazon dia efa afaka mividy ianao miaraka amin'ny fisian'ny rahampitso ho an'ny 199 euro amin'ny maodely fototra indrindra. Ny vidiny dia ilay voalaza tamin'ny ora fampisehoana ary ny 199 euro dia ho an'ny maodely izay manana RAM 2 GB sy fahatsiarovana anatiny 16 GB. Raha ny maodely misy RAM 3 GB sy fahatsiarovana anatiny 16 GB, ny vidiny miakatra hatramin'ny 209 euro, 10 euro fotsiny.
Na izany na tsy izany, ny zavatra avoakan'izy ireo ao amin'ny Lenovo dia ny fijanonana ho mahatoky amin'ireo foto-kevitr'izy ireo amin'ireo fitaovana ireo, rindrambaiko nohavaozina miaraka amin'ny Android Nougat ary fanavaozana mandritra ny roa taona farafahakeliny. Mazava ho azy fa tsy miatrika ireo telefaona finday tsara indrindra ananantsika eny an-tsena isika, fa afaka milaza isika fa raha mitazona izany fifandanjana tadiavintsika foana izany eo afovoany, tombony mba tsy hahomby ny fitaovana, tohano ireo fanavaozana miampy serivisy aorian'ny fivarotana sy vidiny mirakitra. Ny maodely Moto G5 Plus dia tsy maintsy miandry ela kokoa satria tsy hitantsika amidy na amin'ny Amazon, fa tsy mieritreritra ela loatra izahay vao manomboka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny Moto G5 dia azo vidiana any Espana ankehitriny
Ny fampisehoana ny OnePlus 3T Colette Edition, dia mampiseho maodely mainty